Dzidza Modhi Ndege uye Radio Kudzora - Ikkaro
kudzidziswa >> Kudzora redhiyo uye modhi ndege
Kudzora redhiyo uye modhi ndege
Nyika yemhando ndege uye redhiyo kutonga. Ndagara ndine shungu nezve nyika ino yandinoda kutora zvakare.
Tarisa iwo akateedzana kugadzira yako redhiyo-inodzorwa drone.
Chikamu chapera nguva, isu tinofanirwa kuenderera mberi tichitaura nezve maherikoputa, madhiraoni, nemhando dzese dzemagadget dzatinogona kuvaka nekutumira, zvidimbu zvidiki uye yakawanda yekufungidzira uye ruzivo.
Chikamu uye magwara acho achashanda seyakaunza ino nyika inonakidza, yekuzvivaraidza kana kupindwa muropa, chero chaunoda kuitumidza.
Isu tinosimbisa iyo Hovercrafts kana hovercraft
Usafunge kuti ndechimwe chinhu chiri nyore, asi nhanho nhanho inonyatso kukubatsira.
Cirin RC mota inofambiswa nemabhandi erabha
Pakarepo unovaona uye unodanana nechitarisiko chavo. Nekuti yakanaka, yakanaka kwazvo uye kana iwe ukatanga kutarisa uye kuona iyo yainokwanisa, iwe unongoda kuve neyayo, ita imwe yakadaro.
Anonzi Cirin, ari redhiyo-inodzorwa mota inofambiswa nemabhandi erabha. pasina mabhatiri, zvirinani kutaura kuti iri simba rakasimba, asi muchokwadi iri tambo yerabha yemamita 4,5.
Iyi "injini" inoita kunge isingatipi kunakidzwa kwakawanda. Asi Cirin inokwanisa kusvika ingangoita makumi mashanu emakiromita / h nekumhanya kwepamusoro uye inokwanisa kufamba nemamita zana nemakumi mashanu, haisi kuzvitonga kuzhinji, asi zvakanyanya kupfuura zvandaitarisira pachidimbu cherabha. Izvo zvakandiorora ndeyekumhanya kwepamusoro, zvisingaite.
Ne dhizaini yakafuridzirwa sezvazvinotaura Max greenberg, mumwe wevagadziri vayo, muma1950 emota dzemijaho uye mumapfupa eshiri.
Nhanganyaya kumagetsi maherikoputa
Ndiri kuzotanga akateedzana ezvinyorwa zvakatsaurirwa kumagetsi eRC maherikoputa.
Sezvakaita modhi ndegeNekufambira mberi kwetekinoroji uye neChina kugadzira isingadhuri uye isingadhuri, RC maherikoputa akatemerwa mutengo zvine mutsindo. (Kana zvirinani, sekunge nendege, isu hatichazonetseke kana tikazvipwanya).
Huru yeiyi nhepfenyuro ichave iri musangano wepakati-saizi helikopta, (70 cm rotor dhayamita), iyo yandiri kuzoratidza nhanho nhanho. Zvikonzero zvesarudzo iyi zvakasiyana, uye chikuru, mutengo, sezvo chassis kit inoratidzwa mumufananidzo inokodzera maeuro masere chete.
Model ndege, kuvaka IKKARO 002, sumo.
Tichatanga kuvaka imwe yemhando yemagetsi, Ikkaro 002.
Mukuenderana nemweya weblog rino, ndiri kuzoshandisa zvinopfuura zvakajairika zvinhu, makadhibhokisi, kubva pakaiswa fenicha yeIkea uye kamuti nehafu yemopu, (yakagadzirwa nealuminium).
Kuonekwa kwazvino kwesadza kunotevera,
Con prototype yekutanga izvo zvatakaita, kutiza kwaive kwakanyanya kana kushoma kuvimbiswa, nekuda kwehuremu hwakaderera hwezvinhu, pamusoro pemapapiro uye mota yakashandiswa.
Ini ndinokurudzira iyo dzidziso pa maherikoputa emagetsi. Iwe zvechokwadi unozvida zvakare.
Nhanganyaya yemagetsi modhi ndege. Vaka iyo Ikkaro001
Ndiri kutanga nhevedzano pamagetsi emhando yemagetsi, nguva dzose kubva kumweya wewebsite ino. Kugadziriswa kwehupfumi uye kuyedza, pamwe nemaidactics ekuti nei achiitwa uye mashandiro anoita zvinhu. Ini ndichatsanangura midziyo yepuraimari, zvikamu zvakasiyana uye nemabatiro aungaita zvinhu zvakasiyana siyana zvezuva nezuva mukugadzira ndege dzemhando.
Kana ako ari maherikoputa, ndinokusiira imwe dzidziso yekuzadzisa ne Nhanganyaya kumagetsi maherikoputa.
Kuparadzanisa mana vhiri dhiraivha scalextric mota
Rimwe zuva takaturika Kuwedzera maonero e sclextric kana slot mota. Sekutaura kwandakaita nechinangwa chekuona mavakirwo kuti ndiite imwe, iine mavhiri mana uye maviri injini.
Zvakanaka, kuenderera nekutsvaga kweruzivo ini ndakabvisa yangu Peugeot 307 WRC de scalextric, vanozvitengesa se kutyaira 4.